Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. आज अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा अवैध तस्करीविरुद्वको दिवस, विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै – Emountain TV
काठमाडौं, ११ असार । लागु औषधरहित स्वस्थ जीवन भन्ने नारा सहित अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा अवैध तस्करीविरुद्वको दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाईँदै छ । गृहमन्त्रालयको आयोजनामा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम मनाइँदैछ । वर्षेनी लागू औषधविरुद्वको सप्ताह मनाईरहंदा नेपालमा लागू पदार्थ दुव्र्यसनी घट्नुको साटो हरेक वर्ष ११ प्रतिशत भन्दा बढीले बढिरहेको छ ।
विभिन्न मादक पदार्थ लागु तथा पेय पदार्थ जस्ले मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हानी पु-याउँछ त्यस्ता वस्तुहरुलाई लागु पदार्थ भनिन्छ । जस्को सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तीको मानसिक तथा शारिरीक स्थितिमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । यस्तो लागु पर्दाथको प्रयोगबाट नेपालमा वर्षेनी बढीरहेको छ । राज्यकै तर्फबाट गृहमन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग मिलेर लागूऔषधिविरुद्व वर्षेनी साताव्यापी सप्ताह मनाईरहंदा नेपालमा दुव्र्यसनीको संख्या घट्नुको साटो बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समय १५ देखि २५ वर्षसम्मका युवाहरु यसबाट बढि प्रभावित भएको पाइन्छ ।
नेपालमा डेढ लाखभन्दा बढी लागूपदार्थ दुव्र्यसनी रहेका छन् । पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा वर्षेनी ११ दशमलव ३७ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको देखाएको छ । देशभर भएका कुल अपराधमा सात प्रतिशत लागु औषधसंग सम्बन्धित रहेको छ । नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाको कारण पनि लागु औषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनीका घटना नेपालमा बढदै गएका छन ।
प्रहरीले विभिन्न नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलबाटै पनि लागू पदार्थ बरामद र कारोबारी पक्राउ गर्दै आएको छ । लागु औषध प्रयोगकर्तालाई कारवाहि गर्ने नीति नियम तथा संयन्त्र राज्यको कमजोर हुँदा यउटै व्यक्ति पटक पटक लागु औषध दुव्यर्सनि तथा ओसारपसारमा पक्राउ पर्देै आएको छ ।
गत बैेशाखसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले ७ दशमलव ४१ प्रतिशत हीरोइन र १८ दशमलव ६१ प्रतिशत अफिम बरामद गरेको छ । त्यति मात्र नभइ ठुलो संख्यामा गाँजा,चरेस, इन्जेक्सन तथा खाने औषधी बरामद गरेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लागु औषध सेवन कर्तामा ५५ प्रतिशत युवाहरु नै रहेका छन । यस अभियानले लागु औषध रोकथाम नीति मार्गदर्शन तर्जुमा,बैकल्पकि विकास प्रयास र औषधी ऐन कार्यान्वयन र समाधानका उपाय जस्ता कार्यका महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।